Home News Marxaladaha Siyaasadeed Ee Galmudug iyo Mida hada ay Joogto,waa isku mid!!
Marxaladaha Siyaasadeed Ee Galmudug iyo Mida hada ay Joogto,waa isku mid!!
4 July 2015 ayaa la dhisamay maamulka galmudug, gola shacabka galmudug ayaa 49 siyey madadweynihii ugh horey we mamulka galmudug mundane abdikarin xusen guled oo pagu dortay degmada cadaado ee goblka galgaduud.
Feb 26 waxaa iscasiay madaxweyne guled shegaynan ineysan wanaagsaneen xalada cafimadkiisa.
3 much 2017 golaha shacabka maamula galmudug ayaa dortay madaxweynaha galmudug asked ducalle geele xaaf wuxuun helay 54 cod oo aqlabiyada barlamanka ah.
26 septempar 2017 golaha shacabka galmudug ayaa codka kalsonida kala laabtay madaxweyne xaaf” xisado kadibna waxaa sooaf jarmay isku dhicii galmudug, waxaana lesku afgartay in “xaaf” uu sii wato wajibadka madaxweyne we aamulka galumud.
6 decempar 2017 jauuti hishiis lagu midenayey mamulka galmudug oo uu hogaminayey madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlul suna ayaa kala sixiixday hishiis is afgarad ah si loo mideyo awoda siyasaded ee gobalada dhexe, waxaana lesku af gartay in maamulka galmudug uu Ra”iisul was a are eey siyaan ahlul suna sidasna uu u noqdon hogmiyihii ahlul suna ee sheikh axmed shakir.
4 Jun 2018 waxaa magaaada cadaado looga dhawqay in madaxweyne xaaf uusan matalin shacaba galmudug isla markaana lagu shegay qaswade donayo inuu abuuro colaad ka dhax dhacda gobalade dhexe, madaxweyne xaaf iyo madaxda maamulad dalka, iyo dowlada federalka ayaa ku sugan baydhaba iyagoona k wada hadalaa shirkii amniga qaran.